शुक्रको ट्रान्जिट: यो के हो, विशेषताहरू र यसलाई कसरी हेर्ने नेटवर्क मौसम विज्ञान
त्यहाँ खगोल सम्बन्धी घटनाहरू हुन्छन् जुन प्रत्येक सयौं बर्षमा हुन्छ। ती मध्ये एक शुक्र को पारगमन हो। यो एक खगोलीय घटना हो जुन टेलिस्कोपको आविष्कार भएदेखि7पटक मात्र भएको छ। यो १ 1631१, १ 1639 1761।, १ 1769१, १1874 1882,, १2004,, १ 6२ र २०० in मा भयो। अन्तिम पटक यो June जून २०१२ लाई देखियो। यो सौर डिस्कमा काट्ने शुक्रको ट्रान्जिटको बारेमा हो।
यस लेखमा हामी तिमीलाई भनुसको ट्रान्जिट के हो र यसको विशेषताहरू र जिज्ञासाहरू के हुन् भनेर बताउन जाँदैछौं।
1 शुक्रको ट्रान्जिट के हो?
2 सौर्य डिस्कको माध्यमबाट शुक्रको ट्रान्जिट
3 यो कसरी हेर्ने
शुक्रको ट्रान्जिट के हो?
हामी शुक्र ग्रहको ट्रान्जिटलाई सूर्यको डिस्कको अगाडि यस ग्रहको स्पष्ट खण्ड भन्छौं। मैदानबाट तपाई केवल ती ट्रान्जिटहरू अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ भित्री ग्रहहरू यसको कक्षामा। उदाहरण को लागि, दर मा बुध को पारगमन प्रति शताब्दीमा १ 13 पटक र शुक्रको १ mil पटक प्रति मिलेनियमको दरमा। यदि अन्य ग्रहहरू जस्तै बुध, शुक्र र पृथ्वीको कक्षा ठीक एकै विमान हो भने, दुई दुईको ट्रान्जिट धेरै बारम्बार हुने थियो। यद्यपि यो त्यस्तो होइन। कक्षाको विभिन्न स्तरमा भएको तथ्य, एन्काउन्टर कम बारम्बार बनाउनुहोस्। कहिलेकाँही तपाईले ट्रान्जिटले एउटा ग्रहलाई डिस्कहरू पार गर्ने क्रममा धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ।
स्थलीय दृष्टिकोणबाट, बुध र शुक्रले कम संयोजनमा प्रवेश गर्न सक्दछन् र सौर डिस्कमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्, तर ताराको उत्तरी दक्षिणी उत्तरबाट जान्छन्। हामीलाई त्यो थाहा छ बुधको कक्षामा l inc पृथ्वीको झुकाव हो, र शुक्रको us.7 °। कक्षाका यी सर्तहरूको स्थापना संग, हामीले ट्रान्जिटको कारण के हुन सक्छ अवस्थाहरू थाहा पाउनु पर्छ। भित्री ग्रहको तल्लो संयोजन जब यो एक अर्बिटल नोडहरूमा हुन्छ। यस तरिकाले, कक्षाको ती पोइन्टहरू हुन् जुन हाम्रो ग्रहको कक्षाको प्लेन पार गर्छन्। यस अवस्थामा मात्र सूर्य र ग्रह पृथ्वी व्यावहारिक रूपमा एक सीधा रेखामा छन् र यो ग्रहको सौर्य डिस्कको अगाडि अवलोकन गर्न सम्भव छ।
पाराको अन्तिम ट्रान्जिट २०१ 2016 मा अवलोकन गर्न सकिन्छ, जब शुक्रको ट्रान्जिट देख्नको लागि एक शताब्दी भन्दा बढी बितिसकेको छ। यस ग्रहको अर्को ट्रान्जिट एक शताब्दी भन्दा टाढा टाढा कम्पनीहरु पछि हुनेछ डिसेम्बर १०, २११ and र डिसेम्बर,, २१२।
सौर्य डिस्कको माध्यमबाट शुक्रको ट्रान्जिट
सौर्य डिस्कको अगाडि भेनसको ट्रान्जिट बुध भन्दा बढी रमणीय छ। यो किनभने व्यास हाम्रो ग्रहको निकटता को कारण धेरै धेरै छ। हामीलाई थाहा छ कि शुक्रको डिस्क diameter१ डिग्री व्यास (सौर व्यासको १/61०) मा छ। यो बुधको डिस्क भन्दा पाँच गुणा ठूलो छ, जुन केवल १२ डिग्री मात्र पुग्छ। यो हाम्रो ग्रहको दृश्य हो।
यी ट्रान्जिटहरू जून र डिसेम्बरको पहिलो दिनहरूमा लिन्छन् जब सूर्य नोडबाट १ ° ′° than भन्दा कममा अवस्थित हुन्छ र ग्रह यसको सब भन्दा कम संयोजनमा पुग्छ। खगोलविद्हरूले यस प्रकारको घटनालाई विरल घटनाको रूपमा वर्णन गरेका छन र हाम्रो ग्रह नोडहरू मार्फत जाने मितिहरूको एक वा दुई दिनमा मात्र देखा पर्दछ। हामीलाई यो पनि थाहा छ कि ती पूर्ण रूपमा नियमित अन्तरालहरूमा र सधै २ years1 बर्षमा हुन्छन्।
हामी यस दृश्यको महत्त्वलाई उजागर गर्न शुक्र ग्रहको ट्रान्जिटको बेला हुने मुख्य घटनाहरू के हुन जानेछौं भनेर हेर्ने छौं।
पहिलो सम्पर्क: यो पहिलो सम्पर्कमा, डिस्कले सूर्यको डिस्क छुट्टिनुपर्दछ। यो ट्रान्जिटको सुरूवात हो र पछि यसलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ कि यसमा यसलाई कसरी प्रस्तुत गरिन्छ। यो हामीलाई थाहा छ पूर्ण रूपमा त्यस्तो छैन, तर यो दृश्य दृश्य हो।
दोस्रो सम्पर्क: यो यस घटनाको भाग हो जहाँ सौर्य डिस्क भित्र शुक्रको डिस्क ट्यान्जेन्ट छ। हामी देख्न सक्छौं कि कालो पोइन्टले व्यावहारिक रूपमा एकरूप रेखीय गतिको साथ सूर्य यात्रा गर्दछ। अधिक वा कम तपाईं प्रति घण्टा चापको minutes मिनेटको गति अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ। दुई सम्पर्कहरूको बीचमा ट्रान्जिटले धेरै घण्टा लिन सक्दछ।
तेस्रो सम्पर्क: यो तब हो जब वीनसको डिस्कले सौर डिस्कको किनारा छुन्छ।
चार सम्पर्क: यो शुक्र को पारगमन को अन्त हो। यो ट्रान्जिट भागमा, डिस्कहरू बाह्यर्भत् स्पर्शोहरु भेट्दछन्।
यो भन्न सकिन्छ कि पहिलो दुई सम्पर्क इनपुट चरण को रूप मा परिभाषित छन् र अन्तिम व्यक्तिहरु आउटपुट आधार को रूप मा मानिन्छ।
यो कसरी हेर्ने
यो अन्तिम ट्रान्जिट years बर्ष भन्दा बढी पहिले भएको थियो, तर केहि सर्तहरू यसलाई राम्रोसँग हेर्नको लागि पूरा गर्नुपर्‍यो। यो hours घण्टा र १२ मिनेट चल्यो र १०:० :8 बिहान 6::12 22 बिहान यूटी (स्पेनिश प्रायद्वीपको लागि दुई घण्टा), त्यसकारण यो हाम्रो अक्षांशबाट मुश्किलै देखिन्थ्यो। स्पेनमा प्रायद्वीपको भागमा उनीहरू सकेसम्म उत्तरमा बसाइँ सरेका थिए र पछाडि र स्पष्ट पूर्वी क्षितिज भएका उच्च स्थानहरूमा गएका थिए। यो ध्यानमा राख्नु पर्छ कि सौर डिस्कले अन्तिम क्षणहरूमा ट्रान्जिटको साथ छोड्छ। यी अन्तिम क्षणहरू तेस्रो र चौथो सम्पर्क हो। यसले सूर्यको उचाईलाई केही डिग्री जमीनमा बनाउँदछ।
यो सबै भन्दा राम्रो स्थानमा देख्न सकिन्छ यो समुन्द्रको प्रत्यक्ष दृश्यको साथ गिरोनाको तट हो जुन क्षेत्र घाममा उदाउँछ। प्रायद्वीपमा यसलाई अवलोकन गर्न उत्तम स्थान कतै सूर्यको उदय हुने समुद्रको प्रत्यक्ष दृश्यको साथ गिरोनाको तटमा माथिको उचाइमा छ।तुनको संयोजनको बेला पृथ्वीबाट देखिने शुक्रको आकार करीव 60० डिग्री हुन्छ, वा3% सूर्यको कोणीय आकार, अप्टिकल उपकरणको आवश्यकता बिना यसलाई हेर्न सक्षम हुनको लागि पर्याप्त।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईले शुक्रको ट्रान्जिट र यसका सुविधाहरूको बारेमा बढी जान्न सक्छौ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » शुक्रको ट्रान्जिट